लौ चिन्नुहोस,पापको बाउ को हो ? – YesKathmandu.com
लामो समयसम्म धर्मशास्त्र अध्ययन गरेर घर फर्किएका एकजना पण्डितलाई कसैले सोधेछ— ‘पापको बाउको नाम के हो ?’
पण्डितले शास्त्र पल्टाए । तर भेटेनन् । अनि निस्किए पापको बाउ पत्ता लगाउन । भौँतारिँदै उनी वनारस पुगे । त्यहाँ उनको भेट एउटी नर्तकीसँग भयो । उसले पण्डितलाई चिन्तित देखेर भौँतारिनुको कारण सोधी । पण्डितले सबै यथार्थ बताए ।
नर्तकीले भनी— ‘यसको उत्तर सजिलो छ । हिँड्नुहोस् मसँग ।’
पण्डित हुन्छ भनेर नर्तकीको घर गए । नर्तकीले घरमा पण्डितलाई छुट्टै खाने–बस्ने, पूजापाठ गर्ने व्यवस्था गरिदिइन् । पण्डित त्यहीँ बस्न लागे ।
नर्तकीको घरमा बसे पनि पण्डित उसले छोएको पानी पनि खाँदैनथे । उनी आफ्नै हातले गङ्गाजल ल्याउँथे, भोजन पकाउँथे अनि भगवान्लाई भोग लगाएर आपूm पनि खान्थे । त्यसपछि मात्रै नर्तकीले त्यहाँ आएर भाँडावर्तन सफा गरिदिन्थिन् ।
एक दिन नर्तकीले भनी— ‘पण्डितजी, तपाईंलाई साह्रै गाह्रो भयो । अनुमति दिए म नित्य स्नान गरेर तपाईंका लागि चोखो पकाइदिन्छु । यदि मेरो यो सेवालाई तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म तपाईंलाई नित्य एउटा सुनको असर्फी दिन्छु ।’
ब्राह्मणले विचार गरे— यसले दिनैपिच्छे सुनको असर्फी दिन्छे भने त यिनले पकाएको खान के भयो र ? फेरि यहाँ कसले देख्छ र ?
पण्डितले हुन्छ भने । नर्तकीले भोजन पकाइन् । पण्डित खान बसे । पण्डितले खान के आँटेका थिए, नर्तकीले थाल तान्दै भनी— ‘पण्डितजी, पापको बाउको नाम लोभ हो । हिजोसम्म अर्काले ल्याएको पानीसम्म पनि नखाने तपाईं, आज असर्फीको लोभमा मजस्ती नर्तकीले बनाएको कुरा पनि खान तयार हुनुभयो ।’
नर्तकीका कुराले पण्डितजी पानी–पानी भए । उनको तेस्रो नेत्र खुल्यो । उनले थाहा पाए— साँच्चै पापको बाउको नाम लोभै रहेछ ।
सन्देश : लोभका कारण मान्छेले अनेक पाप गर्दछन् । त्यसैले पापबाट बँच्न चाहनेले अनावश्यक लोभबाट पनि बँच्नुपर्छ ।
मञ्जरी प्रकाशन गृहद्धारा प्रकाशन गरिएको कृति ज्ञानोपयोगी कथाहरुबाट
मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न छलफल भैरहेको छः नेता पौडेल
खासोग्गी हत्याको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको कडा आपत्ति